सौगात र प्रियंकाको ‘फाटेको जुत्ता’ लाई १ सय बढी पर्दा « Ramailo छ
सौगात र प्रियंकाको ‘फाटेको जुत्ता’ लाई १ सय बढी पर्दा
फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ देशका करिब एक सय बढी पर्दाबाट प्रदर्शनमा आएको छ । राजधानी र मोफसल गरी १ सय ७ वटा पर्दाबाट फिल्म प्रदर्शनमा आएको निर्माता अर्जुन कुमारले जानकारी दिए । निकेश खड्का निर्देशित फाटेको जुत्ता मा सौगात मल्ल, प्रियंका कार्की, कामेश्वर चौरसिया, रविन्द्र झा लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
कमेडी जनराको फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ को ‘आइएम सरी’ र प्रोमोले चर्चा पायो । के गीत र प्रोमोको चर्चाले दर्शक हलमा आउँलान् ? सोलो रिलिजको मौका पाएको फाटेको जुत्ताले लगानी गठाएर निर्मातालाई नाफा देला ? अभिनेता सौगात मल्ल अभिनित फिल्म फ्लप हुने मौका रोकिएला ? ‘छक्का पञ्जा २’ पछि प्रियंका अभिनित अर्को फिल्म सुपरहिट होला ? यी र यस्तै प्रश्न लिएर फाटेको जुत्ता कात्तिक १७ देखि प्रदर्शनमा आएको । ‘जीन्दगी रक्स’ पछि फिल्म निर्देशनमा फर्किएका निकेश खड्काले निर्देशन गरेको फाटेको जुत्ता कस्तो छ त ? निर्माता अर्जुन कुमारसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :